lumbini general insurance(lumbini general insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको साधारणसभा असार २४ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १५ औँ वार्षिक साधारणसभा यही असार २४ गते बुधबार आयोजना गरिने भएको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभाको मिति तय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको ज्ञोनश्वरस्थित कम्पनीको कार्यालयमा आयोजना गरिने भएको छ। सभामा गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव लाभांश...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले अवितरित हकप्रद लिलामीमा राख्ने, सस्तैमा उठाउने मौका
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारण समूहको अवितरित हकप्रद सेयर फागुन १४ गतेदेखि लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री खुलाउने भएको छ। कम्पनीले गत कात्तिक २४ गतेदेखि मंसिर २९ गतेसम्म बिक्री खुला गरी आवेदन माग गरेको सर्वसाधारणसभा समूहतर्फ ९९ हजार ७२६ कित्ता सेयरका लागि आवेदन नपरेकोले लिलामी प्रक्रियामार्फत...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर उठाउने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि निष्कासन गरेको १७ लाख ६० हजार कित्ता हकप्रद साधारण सेयरमा खरिद आवेदन दिने आज आइतबार अन्तिम मौका रहेको छ । कम्पनीले गतन कात्तिक २४ गतेदेखि चुक्तपुँजी ८८ करोड रुपैयाँको १० सेयरबराबर २ सेयर ९१०ः२० को अनुपातमा रु. १०० अंकित हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । बीमा...
काठमाण्डौ । नेपालका लागि मित्रराष्ट्र जापानका राजदूत मासामिची सेइगो र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरु बीच आज शुक्रबार परिसंघको सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । प्रारम्भमा राजदूत मासामिची सेइगाको स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल जापानबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक एवं लगानी र पर्यटनमा रहेको द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र ह्याम्स हस्पिटल बीच सम्झौता
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र काठमाण्डौ धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स हस्पिटल बीच शुक्रबार नगदरहित उपचार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार इन्स्योरेन्सबाट औषधोपचार तथा दुर्घटना बीमाको सुबिधा लिने ग्राहकहरुले उक्त हस्पिटलमा उपचार गरेमा बीमालेखले थामेसम्मको उपचारबापतको रकम इन्स्योरेन्सले सिधै हस्पिटललाई...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १७.६० लाख कित्ता हकप्रद सेयर आजबाट बिक्री खुला
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि १७ लाख ६० हजार कित्ता हकप्रद साधारण सेयर आज आइतबारदेखि बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले चुक्तपुँजी ८८ करोड रुपैयाँको १० सेयरबराबर २ सेयर (१०ः२) को अनुपातमा रु. १०० अंकित हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार रु १ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउनका...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १७.६० लाख कित्ता हकप्रद सेयर कात्तिक २४ गतेदेखि निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि १७ लाख ६० हजार कित्ता हकप्रद साधारण सेयर कात्तिक २४ गतेदेखि निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्तपुँजी ८८ करोड रुपैयाँको १० सेयरबराबर २ सेयर (१०ः२) को अनुपातमा रु. १०० अंकित हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार रु १ अर्ब...
नियमित लाभांश दिंदै आएको एलजीआईले यसपटक किन सकेन ? यस्तो रहेछ कारण
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स(एलजीआई)ले बोनस सेयर वितरण नगर्नुको कारण खुलेको छ । कम्पनीका संचालक समिति अध्यक्ष मनोहरदास मूलले साउन २९ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न १४ औं वार्षिक साधारणसभामा बोनस सेयर वितरण गर्न नसक्नूको कारण सेयरधनीलाई भनेका हुन् । मूलले बिगतका वर्षहरुमा नियमित लाभांश प्रदान गर्दै आएको, बीमा समितिको...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको एजीएम पुस १४ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योेरेन्स कम्पनी लिमीटेडले आगामी पुस १४ गते शुक्रबार आफ्नो १३ औं वार्षिक साधारणसभा(एजीएम) आह्वान गरेको छ । यो निर्जीवन बिमा कम्पनीले काठमाण्डौको डिल्लीबजार, कालिकास्थानस्थित अमृतभोग पार्टी प्यालेसमा आफ्नो वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । वार्षिक साधारणसभामा संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम...
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीलाई १२.८२ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको निर्णय गरेको छ । यो बिमा कम्पनीको शुक्रबार सम्पन्न १६६ औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वित्तीय विवरण पारित गर्दै सेयरधनीहरुलाई चुक्तापूँजी ७८ करोडको १२.८२ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरणको निर्णय गरेको हो । यो हिसाबले कम्पनीले १० करोड...
एकाएक किन कमजोर बन्यो लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स ?
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको खूद नाफा घटेको छ । चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यो कम्पनीले ३ करोड ९ लाख नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको नाफा ३ करोड ८९ लाख थियो । यो कम्पनीले बिमा शुल्कबाट २१ करोड ५० लाख आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो आम्दानी २१ करोड ३२ लाख थियो । समीक्षा...